The New Mutants (2020) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
ဒီတစ်ခေါက် ပရိတ်သတ်တို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာ တော့ Marvel ကနေ အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ The New Mutants ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Mutants ဆိုတာနဲ့ Avengers Universe ဘက်က မဟုတ်မှန်းသိကြမှာပါ။
X-men တွေဘက်ကပေါ့နော်။ ဒီကားမှာက ပုံမှန် စူပါဟီးရိုး ကားတွေနဲ့မတူတာက ကမ္ဘာကြီးကိုဝိုင်းပြီး ကယ်တင်ကြတဲ့ကားမျိုးမဟုတ်ပဲ Horror ဘက်ကိုသွားတဲ့ ရသမျိုးပေးပါတယ်။
Mutants ဆိုတာတွေကို ကျွန်တော်တို့တွေ X men ကားတွေထဲမှာ မြင်တွေနေဖူးကြမှာပါ။
ဒီအခုထွက်ရှိလာတဲ့ ကားကလည်း ပြောကြားချက်တွေအရတော့ Fox Marvel Production ကနေထွက်ရှိထားတဲ့ X Men Universe နဲ့ ချိတ်ဆက်လာနိုင်တယ်လို့လည်း ပြောထားကြပါတယ်။
တစ်ချို့ကလည်း ဒီရဲ့ ဇာတ်ကားက Super hero team တစ်ခုအနေနဲ့ ရပ်တည်လာနိုင်တယ်လို့လည်း ပြောထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ဇာတ်၀င်ခန်းတွေက Logan ကားထဲက ပုံစံအတိုင်း ပါရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
ဒီကားမှာ ဒန်နီရယ်မွန်းစတားဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် မျုတန့်( သ‌န္ဓေပြောင်းလူသား)ကောင်မလေးက အခြားဆယ်ကျော်သက် မျုတန့် လေးယောက် နဲ့အတူ ထွက်လမ်းမရှိတဲ့ အ‌ဆောက်အဦး ထဲမှာ ‌ဒေါက်တာရိစ် ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ လက်အောက်မှ ာထိန်းသိမ်းထားခြင်းကိုခံရပါတယ်။
ဒေါက်တာရိစ်က သူတို့ကို အကြောင်းအမျိူးမျိူးပြပြီး စမ်းသပ်မှု‌တွေ‌နေ့စဥ်လုပ်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဒုတိယရက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ သူမက
သူမရဲ့ ပုံစံအတိုငျး ဖမျးခြုပျခံရတဲ့ Mutants တှနေဲ့ ရေးနိ့စျတို့ ဆှေးနှေးနတေဲ့စကားဝိုငျးထဲကို ၀ငျရောကျသှားရာကနေ အခငြျးခငြျး ခငျမငျသှားပါတော့တယျ။
ဒါပေမယ့် ဒန်နီရဲ့ အစွမ်းဖြစ်တဲ့ Mirage power က တစ်ဖြည်းဖြည်းကြီးမားလာချိန်မှာ
ဒေါက်တာ ရေးနိစ့်က သူ့ကို အဆုံးစီရင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်။
Mirage power ဆိုတာက သဋပွေောငျးလူသားတှနေဲ့ ကူးသနျးဆကျသှယျနိုငျတဲ့ပါဝါတစျမြိုးပါ။
အဲ့ဒါက အတွင်းစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ Desires နဲ့ Fears တွေကို Illusion အနေနဲ့ထွက်ပေါ်လာစေတာပါ။
ဆိုတော့ အဲ့ဒီပါဝါကို သူမရဲ့ အတူတူ ခြုပျနှောငျခံရတဲ့ သူငယျခငြျးတှဖွေစျတဲ့ ဆမျ၊ ရီယာနာ၊ ရိုဘာတို၊ ရာနီ တို့အပေါျ သကျရောကျလာတဲ့အခါ…
ဒန်နီကရော အသက်ဘေးက လွတ်မြောက်မလား….
ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Phyu Sin ဖြစ်ပါတယ်
ဒီတစ္ေခါက္ ပရိတ္သတ္တို႔ကိုတင္ဆက္ေပးမွာ ေတာ့ Marvel ကေန အသစ္ထြက္ရွိထားတဲ့ The New Mutants ဆိုတဲ့ ဇာတ္ကားေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ Mutants ဆိုတာနဲ႔ Avengers Universe ဘက္က မဟုတ္မွန္းသိၾကမွာပါ။
X-men ေတြဘက္ကေပါ့ေနာ္။ ဒီကားမွာက ပုံမွန္ စူပါဟီး႐ိုး ကားေတြနဲ႔မတူတာက ကမာၻႀကီးကိုဝိုင္းၿပီး ကယ္တင္ၾကတဲ့ကားမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ Horror ဘက္ကိုသြားတဲ့ ရသမ်ိဳးေပးပါတယ္။
Mutants ဆိုတာေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ X men ကားေတြထဲမွာ ျမင္ေတြေနဖူးၾကမွာပါ။
ဒီအခုထြက္ရွိလာတဲ့ ကားကလည္း ေျပာၾကားခ်က္ေတြအရေတာ့ Fox Marvel Production ကေနထြက္ရွိထားတဲ့ X Men Universe နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လာႏိုင္တယ္လို႔လည္း ေျပာထားၾကပါတယ္။
တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ဒီရဲ႕ ဇာတ္ကားက Super hero team တစ္ခုအေနနဲ႔ ရပ္တည္လာႏိုင္တယ္လို႔လည္း ေျပာထားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ဇာတ္၀င္ခန္းေတြက Logan ကားထဲက ပုံစံအတိုင္း ပါရွိေနတာကိုေတြ႕ရမွာပါ။
ဒီကားမွာ ဒန္နီရယ္မြန္းစတားဆိုတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မ်ဳတန္႔( သ‌ေႏၶေျပာင္းလူသား)ေကာင္မေလးက အျခားဆယ္ေက်ာ္သက္ မ်ဳတန႔္ ေလးေယာက္ နဲ႔အတူ ထြက္လမ္းမရွိတဲ့ အ‌ေဆာက္အဦး ထဲမွာ ‌ေဒါက္တာရိစ္ ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ လက္ေအာက္မွ ာထိန္းသိမ္းထားျခင္းကိုခံရပါတယ္။
ေဒါက္တာရိစ္က သူတို႔ကို အေၾကာင္းအမ်ိဴးမ်ိဴးျပၿပီး စမ္းသပ္မႈ‌ေတြ‌ေန႔စဥ္လုပ္ပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ ဒုတိယရက္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူမက
သူမရဲ႕ ပုံစံအတိုင်း ဖမ်းျခဳပ်ခံရတဲ့ Mutants တွေနဲ႔ ေရးနိ႔စ်တို႔ ေဆွးေႏွးနေတဲ့စကားဝိုင်းထဲကို ၀င်ေရာက်သွားရာကေန အချင်းချင်း ခင်မင်သွားပါေတာ့တယ်။
ဒါေပမယ့္ ဒန္နီရဲ႕ အစြမ္းျဖစ္တဲ့ Mirage power က တစ္ျဖည္းျဖည္းႀကီးမားလာခ်ိန္မွာ
ေဒါက္တာ ေရးနိစ့္က သူ႔ကို အဆုံးစီရင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ပါေတာ့တယ္။
Mirage power ဆိုတာက သဋေပြောင်းလူသားတွေနဲ႔ ကူးသန်းဆက်သွယ်ႏိုင်တဲ့ပါဝါတစ်ၿမိဳးပါ။
အဲ့ဒါက အတြင္းစိတ္ထဲမွာရွိေနတဲ့ Desires နဲ႔ Fears ေတြကို Illusion အေနနဲ႔ထြက္ေပၚလာေစတာပါ။
ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီပါဝါကို သူမရဲ႕ အတူတူ ျခဳပ်ေႏွာင်ခံရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဆမ်၊ ရီယာနာ၊ ႐ိုဘာတို၊ ရာနီ တို႔အေပါ် သက်ေရာက်လာတဲ့အခါ…
ဒန္နီကေရာ အသက္ေဘးက လြတ္ေျမာက္မလား….
ဒီဇာတ္ကားကိုဘာသာျပန္ေပးသူကေတာ့ Phyu Sin ျဖစ္ပါတယ္
Option2server.mfile.cloud 445 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 445 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 445 MB SD (480p)
Option9server.mfile.cloud 4.6 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 7.1
Option 10 storage.msubmovie.com 4.6 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 7.1
Option 11 sharer.pw 4.6 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 7.1
Option 12 yuudrive.me 4.6 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 7.1